Palestina:Ny filàzan’ireo mpitoraka blaogy ny tahotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Janoary 2009 6:06 GMT
Vakio amin'ny teny polski, عربي, Français, Italiano, Español, Português, বাংলা, English
Tsy arak'izay noeritreretina, fa dia blaogu mivoaka foana avy ao Gaza mivoatra manaraka ny zava-misy, ary ireo mpitoraka blaogy dia mampita hatrany ny famaritan'izy ireo ny tahotra iainany noho ny fanafihan'ny israeliana.
Exiled dia milaza fa tsy isan'ireo maherifo izy:
Mbola mitsangana isan'ny velona aho izao, nefa mandry tsy lavo loha.
Saingy amin'ny fotoana rehetra dia mety hifanehatra amin-drafahafatesana aho, amin'izay aho vao tena “Ao tsara!” [mandry am-piadanana] .
Ny maty mantsy no hany midana aty Gaza.
Nilaozako ny tranoko sy ny vadikoka nankany amin'ny tranon'ireo fianakaviako aho, nefa tsy hoe handeha hitady toerana azo antoka handosirana ny zera baomba akory.
Tsy maherifo aho; toy ilay zalahy zanaky ny mpiray tampo amiko iny dia mba nangovitra koa aho nandre ny firefodrefotr'ireo fipoahana toy ny hoe vy be nipoaka izany tety akaiky tety.
Nefa niezaka ihany aho ny hifehy izay fangovitako izay nandritry ny fisavoritahana; Tsy maherifo aho e.
Laila El-Haddad, mpitoraka blaogy ao amin'ny Raising Yousuf and Noor, dia mifandray amin'ireo raiamandreniny ao Gaza:
Niantso ahy ny raiko mba hilaza fotsiny fa tsy maninona izy – taorian'izay dia nanjera baomba tao amin'ny Anjerimanontolo Silamo tany an-toerana ireo fiaramanidina mpiady, izay azo raisina ho toy ny sangany indrindra amin'ireo toeram-pianarana ambony.
Taoriana kelin'izay dia niantso ny reniko indray aho, dia nihaino azy nitomany tao anaty telefaonina fotsiny e!. “Ao ambony ao ny fiaramanidina” hoy izy mikiakiaka “Ao ambony ao ny fiaramanidina”. Niezaka ny nampitony azy ihany aho – raha fiaramanidina eo ambony loha izany dia midika izany fa any lavitra any no “lasibatra”. Saingy amin'ny fotoana maha fara-tampony ny tahotra toy izao, tsy misy intsony toerana ho an'ny lojika sy ny fahafaha-mandanjalanja.
Mpitoraka blaogy iray hafa avy ao Gaza, Dr. Mona El-Farra izay any UK [Grande Bretagne] amin'izao fotoana izao, ary very hevitra eo ampanarahana ny zava-mitranga:
Amin'ny fo feno dia feno no anaovako tazan-davitra an'i Gaza. Tsy pihako mihitsy ny fahitalavitra, tsy haiko ny tsy hanaraka izay fandehan'ny any. Indrindra fa hoe misy ireo namako amin'ny sehatry ny fitsaboana miasa anatin'izao tranga tsy roa aman-tany izao. Indrindra fa hoe misy ireo namako, fianakaviako, ary ny vahoaka manontolo mihitsy ao Gaza no miatrika habibiana tafahoatra sy horohoro toy izany foana. Tsy mbola mifarana ity nofy ratsy ity.
I Eva Bartlett, vehivavy Kanadiana mpandàla ny zon'olombelona , izay mitoraka blaogy ao amin'ny In Gaza, dia mamariparitra ny ezaka ataony mba hiatrehana izany:
Atao ahoana no fambara izay tsapa ankehitriny? Tena mbola volivolin'ny fipoahana ny tenako manontolo, tsy hoe tsy manam-pahasahiana aho, fa tena miantraika amin'ny tena ilay izy. Ilaina mihitsy izany, manome hery ahy hanohy ny fanoratana izany, haka sary, hiteny. Fa izay ilay ilany mpandanjalanja ato anatiko izay manohy foana ireny zavatra ireny. Alberto, mpanao gazety espaniola iray mipetraka eto akaikiko eto, manampy ahy hahatsiahy fa omaly alina aho dia nilaza taminy hoe: “Mifantoka loatra amin'ny fijoroana vavolombelona aho ka tsy nahavita namadibadika ny loza.”
Toa sahala amin'ny tsy azo takarina ny hoe hamàrana ity resaka ity …fipoahana maro no re isa-minitra: fiara iray tao amin'ny toby ao Al Bureijj, afovoan'i Gaza, daroka iray hafa tany amin'ny fari-ponenana ao Zaytoun ao an-tanànan'i Gaza, iray hafa tany avaratra… Tamin'ity indray mitoraka ity, tsy ny fahatapahan'ny herinaratra no hanakana ahy tsy hanoratra na tsy fahampian'ny teny na vaovao azo. Fa ity zera baomba mihazo kiry biby ataon'ny Israel aminay rehetra ao Gaza ity, nanomboka tamin'ny 11 ora ny faha 27 Desambra ary mitohy mihazakazaka, mahery vaika, na eo aza ny fisian'ny 300 efa maty sy ny 800 maratra, raha ny vinavina tsotsotra (1000 ho an'ny vinavina sasany), tsy mbola amin'ireo ny maty sy ny naratra tamin'ny daroka faramparany. Te-hahafantatra izay tena zava-misy marina ao Gaza izao tontolo izao, ary mba te-hahalala koa aho, na dia hoe aty aza aho. Lasa faritra natoka-monina i Gaza, misitrir-belona any an-tranony ny olona noho ny tahotra hivoaka eny an-dàlam-be. Ary, raha ny fivoarany hatreto, na ny trano fonenana aza tsy azo antoka intsony. Tsy misy hoe aiza no azo antoka intsony eto Gaza. Ny toerana rehetra dia mety ho lasibatra avokoa. Ary ny lasibatra dia azo ambara ho efa lasibatra nomanina na toerana nanakaiky ilay lasibatra.
Tanaty hafatra iray tsy ela akory, dia hoy fotsiny izy milaza:
Mivavaka aho mba hahavita ny anjaranareo ianareo any ivelan'i Gaza mba hitsaharan'izao habibiana izao
Niampy 7 hafa maty, ampolony naratra nandritry ny daroka farany natao tany avaratr'i Gaza